အိုင်းပက် (တတိယမျိုးဆက်) - ဝီကီပီးဒီးယား
တပ်ချ်စကရင်ကို ပြထားသော အိုင်းပတ်သစ်
၁၆ မတ်၊၂၀၁၂ (10 နိုင်ငံ)
၂၃ မတ်၊ ၂၀၁၂ (၂၅ နိုင်ငံ)
၁၆ဂစ်ဘ် Wi-Fi = US$499.00 / C$519.00
၃၂ဂစ်ဘ် Wi-Fi = US$599.00 / C$619.00
၆၄ဂစ်ဘ် Wi-Fi = US$699.00 / C$719.00
၁၅ဂစ်ဘ် Wi-Fi+4G = US$629.00 / C$649.00
၃၂ဂစ်ဘ် Wi-Fi+4G = US$729.00 / C$749.00
၆၄ဂစ်ဘ် Wi-Fi+4G = US$829.00 / C$849.00
၁၆ဂစ်ဘ်Wi-Fi = £399.00 / €479.00 မှ 489.00 / CHF529.00 အထိ
၃၂ဂစ်ဘ် Wi-Fi = £479.00 / €579.00 မှ 589.00 / CHF629.00 အထိ
၆၄ဂစ်ဘ် Wi-Fi = £559.00 / €679.00 မှ 694.00 / CHF729.00 အထိ
၁၆ဂစ်ဘ် Wi-Fi+4G = £499.00 / €599.00 မှ 609.00 / CHF659.00 အထိ
၃၂ဂစ်ဘ် Wi-Fi+4G = £579.00 / €699.00 မှ 709.00 / CHF759.00 အထိ
၆၄ဂစ်ဘ် Wi-Fi+4G = £659.00 / €799.00 မှ 814.00 / CHF859.00 အထိ
၁၆ဂစ်ဘ် Wi-Fi = ¥42,800
၃၂ဂစ်ဘ် Wi-Fi = ¥50,800
၆၄ဂစ်ဘ် Wi-Fi = ¥58,800
(Wi-Fi+4G model မထွက်)
၁၆ဂစ်ဘ် Wi-Fi = HK$3,888.00
၃၂ဂစ်ဘ် Wi-Fi = HK$4,688.00
၆၄ဂစ်ဘ် Wi-Fi = HK$5,488.00
၇ရက်၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိခဲ့
32bit ARM-based Apple A5X 1200MHz
၁၆ဂစ်ဘ်၊ ၃၂ဂစ်ဘ် သို့ ၆၄ဂစ်ဘ်
၉.၇လက်မ၊ 2048×1536 px color IPS TFT resolution ၄:၃ အချိုး
Audio Formats: HE-AAC (V1 နှင့် V2)၊ AAC (8 မှ 320 Kbps အထိ)၊ Protected AAC ( iTunes Store မှ), MP3 (8 မှ 320 Kbps အထိ)၊ MP3 VBR၊ Audible (ဖော်မတ် 2၊3& 4၊ AEA၊ AAX၊ နှင့် AAX+)၊Apple Lossless၊ AIFF၊ နှင့် WAV
Multi-touch တပ်ချ်စကရင်၊ အသံတိုးကျယ်ခလုတ်၊ proximity နှင့် ambient မီးဆင်ဆာများ၊ မိုက်၊ ဆယ်လူလာ + ဂျီပီအက်စ် (4G Model အတွက်သာ)၊ Micro-SIMCard ထည့်ရန်အပေါက် (4G Model only)
ဖေ့စ်တိုင်း 0.3-megapixel ကင်မရာ
အိုင်တျူးန်စတိုး၊ အက်ပ်စတိုး၊ မိုလ်ဘိုင်းမီ၊ အိုင်ဘွတ်ခ်စတိုး၊ ဂိမ်းစင်တာ၊ ဖိုတိုဘုသ်၊ အိုင်ကလောက်
Wi-Fi model: ၁.၄၄ ပေါင်
Wi-Fi + 4G LTE model: ၁.၄၆ ပေါင်
အိုင်းပတ် (The new iPad ဟု ကြေညာခဲ့၍ လူအများမှ iPad3သို့ iPad HD ဟု သိကြသည်။)  သည် အိုင်ပတ်၏ တတိယမြောက်နှင့် လက်ရှိမျိုးဆက်ဖြစ်ပြီး အက်ပဲလ်မှ ရေးဆွဲ၊ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော တက်ဘလတ်ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မီဒီယာ၊ စာအုပ်၊ ရုပ်ရှင်၊ သီချင်း၊ ဂိမ်း၊ အစီအစဉ်တင်ဆက်မှုများနှင့် ဝက်ဘ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အဖြူ၊ အနက်နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အိုင်းပက် ၂ အတွက် စမတ်အဖုံးနှင့် ကိုက်ညီမည်ဖြစ်သည်။
အက်ပဲလ်သည် ကွန်ပျူတာများကို အစားထိုးရန်အတွက် ပုံနှင့် ဗီဒီယို အဲဒစ်တင်း နှင့် ဂိမ်းများ အတွက် ဂရပ်ဖ်ဖစ်များ ပါဝင်သော အိုင်းပတ်ကို ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ရက်နေ့တွင် အက်ပဲလ်သည် မတ်လ ၇ရက်နေ့အတွက် မီဒီယာပွဲတစ်ခုကို ဖိတ်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။  ဖိတ်ကြားချက်သည် ‘‘ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင်တို့ကြည့်ရ ထိရမည့်အရာတစ်ခုရှိသည်။’’ ဖြစ်သည်။  အက်ပဲလ် စီအီးအို တင်မ်ကွတ်ခ်သည် စက်ကို မတ်လ ၇ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် ယာဘား ဘူနာ အနုပညာစင်တာ၌ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အက်ပဲလ်သည် စက်များကို မတ်လ ၁၆ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။  သို့သော် အချို့နိုင်ငံများတွင်မူ မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၁၂ရောက်သည်အထိ ထွက်ရှိဦးမည် မဟုတ်ပေ။
အိုင်းပက်အသစ်သည် မတ်လ ၇ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သော အိုင်အိုအက်စ် ၅.၁ ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ 
အိုင်ပက်အသစ်၏ မော်ဒယ်များသည် ဆယ်လူလာ နက်ဝေါ့ခ်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသောနှင့်၊ မရှိသောဟူ၍ နှစ်မျိုး ထုတ်လုပ်ထားသည်။ မော်ဒယ်အားလုံးသည် ဝိုင်ယာလက်စ် အယ်လ်အေအန်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အိုင်ပတ်သစ်တွင် ၁၀နာရီအထိခံသော lithium-ion polymer ဓာတ်ခဲ၊ Apple A5X ဒူရယ်ကော ပရိုဆက်ဆာ၊ PowerVR SGX543MP4 ဂရပ်ဖစ် ပရိုဆက်ဆာ၊ ၅ megapixel နှင့် ၁၀၈၀p ဗီဒီယို ရိုက်ကူးနိုင်သော အနောက်ကင်မရာ နှင့် ဖေ့စ်တိုင်းအတွက် VGA အရှေ့ဗီဒီယိုဖုန်းကင်မရာ တို့ပါဝင်သည်။ ပုံထွက်သည် 2048×1536 (QXGA)&mdash ရှိ၍ အိုင်းပက် ၂ တွင်ရှိသော pixels ထက် လေးဆပိုများသည်။ အိုင်းပက်သစ်သည် အိုင်းပတ်၂ ထက် အနည်းငယ် (၀.၆မီလီမီတာ) ပိုထူလာ၍ ၄၉ ဂရမ်ပိုလေးသွားသည်။
↑ "iPad 3: the tablet that will give mobile operatorsaheadache"၊ The Guardian၊ The Guardian၊7March 2012။ 8 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "New iPad / iPad 3: all the latest details"၊ Techradar၊ Techradar၊7March 2012။ 8 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sarno၊ David။ "Apple's new iPad takes aim at the PC"၊ March 7, 2012။ March 8, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pepitone၊ Julianne။ "Apple likely to unveil iPad3on March 7"၊ February 28, 2012။ March 8, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Topolsky၊ Joshua (February 28, 2012)။ Official: Apple iPad3event slated for March 7th in San Francisco။ The Verge။ March 1, 2012. တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Apple unveils new iPad with high-definition screen"၊ BBC News၊ BBC၊ March 7, 2012။ March 7, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "A new, high-definition iPad from Apple"၊ March 7, 2012။ March 7, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Associated Press။ "AtaGlance: Apple’s iPad vs. older model"၊ March 8, 2012။ March 8, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 March 2012။
↑ Wagstaff၊ Keith။ "Apple Announces iOS 5.1, iPhoto App, and Updates to GarageBand and iMovie Apps"၊ March 7, 2012။ March 8, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
iPad Archived6March 2013 at the Wayback Machine. launch event video at Yerba Buena Center for the Arts.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုင်းပက်_(တတိယမျိုးဆက်)&oldid=690480" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။